Aha ngwaahịa: Agba Ceramic Mugs
Ike: 365 ml
Nkeji: 12.5 * 9.5 cm
Agba: matte ọcha ， ojii matte ， acha uhie uhie, wdg
Ahịa: USD1.6-USD2.5 / PC
Atụmatụ: A na-eji iko Mark mee ihe dị ka iko mmiri, mmiri ara ehi, kọfị na ihe ndị ọzọ na-emegharị. Ọ na-adịkwu mma iji ya. Enwere ike ịnye ụdị lids abụọ ụdị lids mbụ, nke na-eme ka ọ mara mma karịa.
na ala nke na-abụghị ndị ileghara imewe ahụ imewe ezi ọgwụgwụ nwere ike ịbụ mgbochi na-ekpo ọkụ ochie ụdị
Iko ite: Ọ nwere udiri siri ike ma dabara adaba maka kọfị a deepara n'ọkụ nwere uto siri ike.
Poselin: nke a na-ahụkarị, ọ nwere ike ịkọwa okpukpo siri ike nke kọfị. N’etiti ha, kọfị kọfị kọfị ọkpụkpụ nke ụrọ china dị elu ma jikọta ya na nri anụ anụmanụ nwere anụ ọkụ, agba dị nro, njupụta dị elu na nchekwa ọkụ dị mma, nke nwere ike ime ka kọfị dị na iko ahụ belata nwayọ nwayọ nwayọ, na bụ ihe kachasị nwee ike igosipụta kọfị kọfị Nnukwu nhọrọ.
Nke gara aga: kọfị cup atọ-mpempe set
Osote: Corrugated seramiiki kọfị iko, kọfị Foto muglọ Nga
Achara Kọfị Kọfị Tumbler
Kọfị Tumbler Omenala
Glass Kọfị Kọfị Tumbler
Cceded kọfị Tumbler
Gwara mmanụ Coffee Tumbler
Steel kọfị Tumbler
Tumbler Kọfị Mug
Akpụkpọ anụ ahụ
omenala 304 abụọ-oyi akwa igwe anaghị agba nchara ahịhịa c ...